Amasiko ase-Argentina | Izindaba Zokuhamba
UMariela Carril | | Argentina, Cultura
Argentina ngokuyisisekelo a izwe labokufika, Yize ukuma kwayo kukhulu kangangokuba kuye ngokuthi uya kuphi uzokwazi ukuxhumana namasiko angaqhamuki kwabokufika base-Europe kodwa avela kubantu bomdabu kanye nomakhelwane baseLatin America.
Ngakho, Amasiko ase-Argentina ahlukahlukene futhi ngokuqinisekile uzothola lowo omthanda kakhulu ngokuya nge-gastronomy, ukuzijabulisa noma indlela oziphatha ngayo. Ngabe uya e-Argentina? Isikhathi esihle uma ungumuntu waseYurophu ngoba ukwehla kwamandla epeso kube kuhle ngalo hulumeni wokugcina futhi ushintsho luzokuthokozela kakhulu.
1 Amasiko wase-Argentina wokudla
2 Amasiko omphakathi ase-Argentina
Amasiko wase-Argentina wokudla
Ukudla kuqala. Kukhona okunye ukudla okujwayelekile e-Argentina futhi okungabhekwa njengophawu lwayo lokuhweba, noma ngabe kudliwa kwamanye amazwe esifundeni. Ngikhuluma asado, dulce de leche kanye empanadas.
I-Argentina bekulokhu kuyizwe elithumela ezolimo ngaphandle kwezolimo, futhi ukungabi bikho kwezimboni ezibucayi kube yinkinga enkulu yezentuthuko, ngakho-ke izinkomo, ukolweni kanye nosoya manje yizona ezigcwala amapampu awo acebile anomswakama. Inyama imnandi, ikhwalithi enhle kakhulu, ngokunembile ngenxa yamadlelo, ngakho-ke akekho umuntu wase-Argentina ongazilungiseleli i-asado okungenani kanye ngesonto. Okwakudala izimpelasonto nomndeni noma nabangane.
Lapha, inyama yenkomo isikeka ngokuhlukile namagama ahlukile kuye ngendawo yezwe. Loin, umucu wokosa, izinqa, isinqe, imambre. Isinkwa seChorizo, i-choripan, isinkwa esine-sausage yegazi, i-morcipán. Ama-achuras awakwazi ukulahleka ku-grill yase-Argentina noma: amasoseji, i-gizzard, izinso, isoseji legazi, ama-chinchulines (amathumbu). Umphathi omuhle wokosa inyama uba ngobuchwepheshe ngokuhamba kwesikhathi, ukosa inyama ngemuva kokugcoba, ukuphonselwa inselelo ngemuva kwenselelo, ngakho-ke uma unenhlanhla yokuhlangana noyedwa uzodla inyama eyosiwe engcono kakhulu yempilo yakho.
Yini inyama engaka ehambisana nayo? Yebo, ngamasaladi noma ama-chips, isinkwa sosuku, amasosi ambalwa amnandi (i-chimichurri ne-creole sauce), bese uthatha i-hepatoprotector bese uyahamba uyolala ugaye. Idili lolwanga!
Elinye lamasiko okugcizelela ukudla yi- i-caramel, uswidi owenziwe ngobisi noshukela onsundu onsundu futhi omnandi kakhulu. Ama-Argentina ayayithanda futhi alikho uswidi noma ikhekhe elingenayo i-dulce de leche.
I-Las ama-invoyisiIsibonelo, inhlama ejwayelekile enoshukela eyenziwe ngamabhikawo futhi ithengiswe yiyunithi noma idazini, inezinhlobonhlobo eziningi ezine-dulce de leche futhi efanayo nama-ayisikhilimu amaswidi (alfajores, amaswidi, ushokoledi).
Ngikholwe, uma uyizama uzoyithanda futhi uzofuna ukugoduka nezinye zalezi zinto ezithengiswa kuzo zonke izitolo nezitolo ezinkulu. Ekugcineni, i- empanadas. Ama-Empanadas enziwa ezingxenyeni eziningi zeLatin America, futhi izinhlobo ezivela enyakatho ye-Argentina zithandwa kakhulu lapha. Leyo nyakatho esondelene kakhulu neBolivia nePeru futhi yingakho izitsha zayo noma ngisho nolimi lwayo kuneziningi zalezo zingxenye.
Kunezinhlobonhlobo ze-empanada esifundazweni ngasinye kepha ngokuyisisekelo zivela inyama noma i-humita (ummbila, ummbila), kubhakwe noma okuthosiwe. Abathandi be-Empanadas bakhetha ukuzenzela, benza inhlama nokugcwalisa ekhaya, kepha emadolobheni amakhulu lelo siko selilahlekile futhi namuhla ungabathenga kunoma yisiphi isitolo esidayisa ama-empanada nama-pizza ngokufanayo.
Ngisho neBuenos Aires ibonakala ngokuthengisa izinhlobonhlobo ezinkulu ze-empanadas ezingabonakali ngaphakathi: i-ham noshizi, imifino, ne-bacon nama-plums, nge-whisky, inkukhu ne-etcetera ebanzi.
Ekugcineni, maqondana nesiphuzo, awukwazi ukungakunaki umlingani. Kuyinto a ukumnika enziwe ngamahlamvu esitshalo okuthiwa i-yerba mate (amaqabunga ayasikwa futhi agaywe), ahlanganiswe athengiswe. Ngemuva kwalokho, i-Argentina ngayinye inomlingani wayo ekhaya (isitsha esincane noma esikhudlwana, esenziwe ngokhuni, ingilazi, isigaxa noma isigaxa esomisiwe, ngokwesibonelo), nesibani sokukhipha ukumnika.
Irba ibekwe ngaphakathi, kufakwa amanzi ashisayo ngaphandle kokubilisa futhi kuyaphuzwa, okungcono enkampanini enempilo ngoba umoya womlingani owenhlalo, uyabiwa.
Amasiko omphakathi ase-Argentina
Ama-Argentine angabantu abavulekile, abanobungane nabanobungane. Uma bekuthanda, abanankinga nokuxoxa, bakumemele endlini yabo futhi baphume nawe. IBuenos Aires yidolobha elikhulu kakhulu elinesigqi esingaphezu kwenhlokodolobha yomhlaba, ngakho-ke abantu bayahamba kusuka ngoLwesithathu. Idolobha linempilo eningi ebusuku, imigoqo nezindawo zokudlela eziningi, kepha ama-Argentina nawo athanda i-cinema nendawo yaseshashalazini kakhulu futhi ahamba ngomgwaqo ngisho nasebusuku.
Komakhelwane kujwayelekile ukubona amaqembu abangane ekhuluma kusa, behleli ekhoneni noma esigcawini. Amadolobha angaphakathi nezwe anokuphila komphakathi okuningi kuneBuenos Aires ngoba kwamaningi awo, ikakhulukazi enyakatho, i-siesta ingcwele ngakho amahora okusebenza anqunywa emva kwemini.
Lapho-ke, njengoba amadolobha futhi emancane futhi kungekho muntu ohlala kude kakhulu, ungaphuma nsuku zonke ukuthi ngakusasa kuhlale kunesikhathi sokuphumula kancane.
Ngenkathi kwezinye izingxenye zomhlaba kuyaqabukela ukuthi abantu bawele ngokungalindelekile endlini yomngani lapha kuvame ukuvakashela umngani ngaphandle kwesixwayiso. Bakhala insimbi futhi voila. Akekho okhubekile, akekho okufanele ahlole i-ajenda. Ngisho, ukuhlangana ezindlini kuyinto ejwayelekileMhlawumbe sidle bese siyaphuma, mhlawumbe siyokosa inyama. Abangane bahlale benweba umndeni. Umndeni, ngakolunye uhlangothi, uhlale usondelene kakhulu ne-Argentina.
Ngokwesibonelo, ngeSonto kuvamile ngomkhaya ukuba ndawonye ukuze uthole isidlo sasemini. Isiko livamile edolobheni labokufika futhi yize i-asado ingukudla okujwayelekile, kunjalo nange-pasta. I-Argentina ithole ukufuduka kwabantu abavela e-Italy ngakho-ke kunezizukulwane eziningi zamaNtaliyane bathanda ipasta. Ngenkathi isizukulwane se hhayi Isiko lokuqoqa uzungeze isitsha se-ravioli noma i-noodle ne-sauce cishe selicishiwe kakhulu. Esinye isiko elihlonishwa kakhulu wukudla imbuzane noma imbuzane ngomhlaka 29 enyangeni.
Ayini-ke amasiko ase-Argentina? I-Asado, empanadas, dulce de leche (ungakhohlwa ukuzama u-ayisikhilimu walokhu kunambitheka), umlingani (onamakhambi, amnandi noma ayababa, yize eyendabuko ihlale ibaba), ukhuluma nabangane, ukuphuma ukuyophuza ubhiya okuphakade izinkulumo zekhofi lapho umuntu wase-Argentina angaxazulula umhlaba ngokudlala phakathi kwemibono yezepolitiki lapho, kusobala ukuthi iPeronism ihlala isemoyeni, noma ngabe ubani oyithandayo.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba Zokuhamba » América » Argentina » Amasiko ase-Argentina